Soosaarayaasha Cuntada & Insole iyo Warshad - Shiinaha Soosaarayaasha Cudurka & Insole
Idaha caadiga ah ee ido xiirashada dhegaha
Ka samaysan maqaar adhi oo dhab ah, maqaarka suudku waa mid diiran oo neefsan kara. Dhogorta Idaha waa jilicsan tahay haddana wey xoogan tahay. Si xarrago leh loo qaabeeyey oo loo farsameeyay, ugu fiican howlaha banaanka xilliga qaboobaha ● Qodobka maya: EF-001 ● 100% idaha Adhijir iyo suud ● Dherer dherer ah: 1.6cm ● Midab: madow, xabadka.kook, cawl iyo midabbo kale ● Diiran oo diidaya qoyaanka Design Naqshad qaabeysan iyo qaab-dhismeed weyn, Cabbirka dadka
ido dhab ah oo xiiriira dhogor dhago
Waxay ka samaysan tahay suede dhab ah oo maqaar sare leh oo xiir ah. Maqaarka suudku waa diirimaad iyo neefsasho labadaba. Dhogorta Idaha waa jilicsan tahay haddana wey xoogan tahay. Si xarrago leh loo qaabeeyey oo loo farsameeyay, ugu fiican howlaha banaanka xilliga qaboobaha ● Qodobka maya: EF-002 ● Faahfaahin laba muuqaal oo cufan ● Muuqaal suede ah oo dhab ah, Daaro raxan raxan xiro leh ● Dherer dherer ah: 1.2cm ● Midab: madow, xabadka. iyo midabyo kale design Naqshadeynta moodada iyo taam weyn, Qiyaasta qofka
Classical suede class ido dhego xiiran
Ka samaysan xiirasho dhab ah, maqaar suede waa diirimaad iyo neefsasho labadaba. dhogorta xiiraysaa way jilicsan tahay haddana way xoogan tahay. Si xarrago leh loo qaabeeyey oo loo farsameeyay, ugu fiican howlaha banaanka xilliga qaboobaha ● Qodobka maya: EF-008 leather Maqaarka suede maqaarka dhabta ah iyo dhogorta dhogorta dhogorta ah ● Dherer dherer ah: 1.2cm ● Midab: madow, Chestnut.coffe iyo midabbo kale ● Diirran oo diidaya qoyaanka ● Naqshadaynta moodada ah iyo taam weyn, Cabbirka dadka
Real double double wajahay ido xiirashada dhegaha
Loogu talagalay oo gebi ahaanba maqaarka idaha, diiran iyo neefsasho labadaba. Dhogorta Idaha waa jilicsan tahay haddana wey xoogan tahay. Si xarrago leh loo qaabeeyey oo loo farsameeyay, ugu fiican howlaha banaanka xilliga qaboobaha ● Qodobka maya: EF-007 ● oo ka samaysan gebi ahaanba harag ● Dherer dherer ah: 1.2cm ● Midab: madow, xabadka.cafeega iyo midabbada kale design Naqshad quruxsan oo aad u habboon, Cabirka dadka
Ka samaysan darajo suede ah oo dhab ah, iyo ido raaxo leh oo dhogorta dhogorta leh. Maqaar suede waa diiran oo neefsan kara. Dhogorta Idaha waa jilicsan tahay haddana wey xoogan tahay. Si xarrago leh loo qaabeeyey oo loo farsameeyay, ugu fiican howlaha banaanka xilliga qaboobaha ● Qodobka maya: EF-006 ● Grad suede real dibada sheep raaxo qaali ah oo dhogorta dhogorta ah long Dherer dherer ah: 1.6cm ● Midab: madow, xabadka, kafeega, cawl iyo midabbo kale ... Naqshadaynta moodada ah iyo taam weyn, Cabbirka dadka
dhogorta dhogorta dhogorta leh ee xiisaha leh oo dhejiska lagu dhejiyay
Ka samaysan dhogor xiir ah oo ido xiiran iyo dhogor tolmo leh. Dhogorta Idaha waa jilicsan tahay haddana wey xoogan tahay. Si xarrago leh loo qaabeeyey oo loo farsameeyay, ugu fiican howlaha banaanka xilliga qaboobaha ● Qodobka maya: EF-003 wool Taranka dhogorta outer sheep Raaxo dheer oo ido dhogorta leh ● Dherer dherer ah: 1.6cm ● Midab: madow, xabadka iyo midabada kale design Naqshadeynta moodada iyo taam weyn, Ones size
jilicsan dhogorta dhogorta dhabta ah ee dhegaha
Waxay ka samaysan tahay suede dhab ah oo maqaar sare leh oo xiir ah. Maqaarka suudku waa diirimaad iyo neefsasho labadaba. Dhogorta Idaha waa jilicsan tahay haddana wey xoogan tahay. Si xarrago leh loo qaabeeyey oo loo farsameeyay, oo ugu fiican howlaha banaanka xilliga qaboobaha ● Qodobka maya: EF-003 ● Faahfaahin dheeri ah oo muuqaal ah ● Dhab ahaan suede banaanka, Dunta dhogorta adhiga oo raaxo leh ool Dherer dherer ah: 1.6cm ● Midab: madow, xabadka. midabada kale design Naqshadeynta moodada iyo taam weyn, Qiyaasta qofka
harag adhi oo dhogor dhogor ah insole
Laga sameeyay 100% lambskin wichih lambskin dhab ah waa mid aad u diiran oo waaraya hadana hadana fiilooyinka dabiiciga ah waxay ka dhigayaan galoofyadan inay neefsadaan. oo dhogorta ayaa jilicsan oo adkeysi leh. u dhaqmo sida kuleylka dabiiciga ah ee jirkaaga. Qodobka maya: SI-002 100% dhogorta lambskin iyo dhogorta la dareemay inay taageerto Dhererka dhogorta wuxuu kudhowaad yahay 10-16mm .. Qiyaasaha: 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45. Farsamada dharka: lambskinka iyo dareemida culeyska ayaa waxaa ku dhegay xabagta deegaanka, Adiga wuxuu ku jari karaa cabirka ku habboon